Accueil > Gazetin'ny nosy > JIRAMA: Mihamafy ny adin’ny sendika sy ny Tale jeneraly
JIRAMA: Mihamafy ny adin’ny sendika sy ny Tale jeneraly
Izay iray miala na ny tale jeneralin’ny Jirama Aimé Olivier Jaomiary na ireo mpitarika sendikaly ao amin’ity orinasa ity. Mihamafy ny ady ataon’ny firaisan’ny sendikan’ny Jirama izay miisa dimy sy ny mpitantana ny JIRAMA amin’izao fotoana izao. Nanambara ny mpikambana ao amin’ny Jirama fa manao didy jadona, mpanararaotra fahefana ary mandrahona mpiasa sy manao didiko fehy lehibe ity tale jeneraly ity. Tsy manaja koa ny didy mifehy ny asa ka manosihosy ny lalàna fototra iraisam-pirenena sy Malagasy momban’ny asa.
Mbola valo volana fotsiny izay no nitondran’ity rangahy ity ny Jirama hoy ireo ao amin’ny firaisan’ny sendika ao amin’ny JIRAMA, dia 50 sahady izay no mpiasa voaroaka tao amin’ny orinasa. Tsy manaraka ny lalàna ny asa akory izany fandroahana izany ka izany no isan’ny takian’ny mpiasan’ny Jirama hanesorana ity tale jeneraly ity. Efa nitondra ny raharaha any amin’ny sampandraharaha miandraikitra ny fisafoana ny asa izy ireo. Mbola takian’ny mpiasan’ny Jirama koa ny mahakasika ny fitantanana ny rano izay tsy mazava eto Antananarivo. Mifono hosoka maro izany araka ny voalazan’ireto mpiasa hatrany. Milaza ny handraisan’ny mpitsiri-draharahan’ny fandaniana ny volam-panjakana na ny IGE koa ireto mpiasa ireto. Fa isan’ny olana lehibe koa amin’izao fotoana izao dia ny tsy firaharahan’ny tale jeneralin’ny Jirama ity ny mpiasa sy ny zony ary indrindra fa ireo birao mpitarika ny sendika izay misolotena ny mpiasa manontolo. Tsy mety mihaona amin’ireo sendika ireo ingahy tale jeneraly nefa ny mpiasa no mpiara- miombon’antoka voalohany amin’ny orinasa. Mbola olana izay hafa koa mahakasika ny fifanarahana mahafaty antoka ny Jirama sy ny orinasa eo Ambohimanambola izay manao fifanaraha mamono antoka ny orinasa sy ny firenena, ary mbola raharaha hafa koa ny fampiasana menaka mavesatra mampihodina ny milina ao amin’ny Jirama izay tsy mazava hatrany. Noho izany dia mihenjana ny tady eo amin’ny roa tonta. Misy ny mpitarika sendika izay noroahan’ity tale jeneraly ity miaraka amin’ny mpiasa maro. Mbola mandrahona ny hanala ireo mpitarika sendika hafa koa ingahy tale jeneraly ity raha ny fitantaran’ireo mpiasa hatrany. Hitohy ny fitakiana hataon’izy ireo ary ny fialan’ny tale jeneraly no tanjona ankehitriny. Ny herinandro ity no voalaza fa hanombohan’ny hetsika.
Eo anatrehan’izany dia tsy maintsy hisy ny olana amin’ny fandehanan’ny orinasa ity atsy ho atsy eo amin’ny resaka famatsiana herinaratra eto Antananarivo raha toa ka tsy misy ny famahana olana izao raharaha izao. Marihina fa efa manomboka miverina indray ankehitriny ny delestazy.